Ukuqoqa - umsebenzi, okuhloswe ngalo kubutsela yomphakathi - izinto noma abantu futhi ukuthi abe lenani eliphakeme noma ngaphandle kwenani ngisho nelincane. Lezi zihlanganisa: izinambuzane, amagobolondo, amatshe, imidwebo, zemali, izinto, izimoto, ama-movie, amabhuku, nokunye okunye.
Ngokwesibonelo, ukuthatha uhlamvu lwemali. Bobabili elula futhi kuyabiza. Okokuqala, udinga ukukhetha ofuna ukuqoqa yena iqoqo, bese ubeka imigomo ethize. Ngemva kokukhetha elide ukufunda, ukuqoqa ulwazi, ukugqekeza subgroups namaqembu. Kukhona uqoqa, okubandakanya izindleko ezinkulu ebonakalayo futhi esingalindelekile, futhi kukhona labo, ngokuvamile, asidingi izindleko. Lapha Nokho, futhi kudingeka ukwakhela kulokho onakho. Isikhathi esining impela ubeka umgomo, udinga ukuthola ncamashi izinto eqoqweni, okuyinto ngokuvamile nje musa ukuthole. Futhi, nokwanda ukuqoqwa abantu zingathola uhlangothi emihle nemibi, ukuthi obuchaywe psyche.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukwazi ukuthi izinto weqoqo, futhi bakwazi ukuhlukanisa okoqobo kusuka mbumbulu. Njengoba, isibonelo, imali kanye lwemali ibhange liye babedinga njalo, kubalulekile ukuqapha ngokucophelela zonke izici, hhayi ukuphuthelwa ithuba nokunciphisa plan!
Namuhla, uhlamvu lwemali ukubuthwa - omunye yezinto ezithakazelisa kakhulu, futhi okubaluleke kakhulu, wokuzilibazisa othandwa. Yonke iplanethi nhlobo muntu ababengeke ziyobuthelwa ngokuba umphefumulo wayo usekhona lutho. Ngubani - ukuthi isifiso ngokushesha ucime, kodwa othile engabonakali futhi bawahlolisisa konke futhi aphathwe ngendlela efanele. Ngenxa yalo msebenzi ezithakazelisayo, omunye njalo uthola ingxoxo, ebona izwe engaphakathi ibulala ngokusebenzisa iqoqo walo. Futhi okubaluleke kakhulu, ukuthi lolu hlobo umsebenzi ayidingi ukunakekelwa njalo, njengoba ungenza nganoma yisiphi isikhathi. UNkulunkulu wayengajabule ngalendoda lokuqala amaqoqo e-Russia - uPeter Omkhulu. Yena ingane isencane yokufuna uyakuthanda nemisebenzi lokuqoqa yobuciko, izikhali, zemali. Isithakazelo esinjalo uPetru akhiwa othisha bakhe njengoba angaphandle futhi Russian. Nakuba abantu abaningi abaqondi uthando lwakhe, kodwa Kuyathakazelisa ayibukele.
Coin ukubuthwa elinye igama "Numismatics". Abokuqala Chinese yasungulwa ngasekuqaleni 7th ekhulwini BC. Nokho, lezi zinhlamvu, ikakhulukazi, kwadingeka nenkolo.
Awazi ukuthi kufanele ubhekephi ukuze uthole zemali? Eqinisweni, nje inwabi, kubalulekile, ngaphezu kwakho konke, bakwazi ukuxhumana nabantu, ilungelo ukwethula inkulumo, umcabango wakhe. imithombo Iningi ucwaningo eziyisisekelo yilezi: i-Inthanethi, abezindaba, abangane. Lapha ungakwazi ngaso sonke isikhathi ukuthola ulwazi oluningi ngale ndaba.
Futhi, ukudayiswa ezihlukahlukene zemali of amatshe ayigugu kanye eziyigugu, imali yamaphepha wahlanganyela iningi amabhange, lapho ungakwazi ukuthenga izimo hhayi kuphela eyodwa, kodwa amasethi isipho nje.
Ngokuvamile, abaqoqi bakhangwa uhlobo olulodwa kuphela isiqondiso. lula kakhulu futhi kungadingeki ukuba ucabange ngezinkinga zezimali. Yiqiniso, uma izimvume isikhathi, ezezimali kanye namathuba ke ungenza umuntu ngaphezu okuthile. Kodwa, futhi, kufanele baqaphe kakhulu futhi ngokucophelela.